Tsy fandriampahalemana, tsy fandraisana andraikitra… | NewsMada
Tsy fandriampahalemana, tsy fandraisana andraikitra…
Mirongatra indray ny fitsaram-bahoaka sy ny fakana an-keriny. Nahoana loatra? Misy mahita sy milaza fa noho ny fifidianana antomotra io: fanakorontanana, fitadiavam-bola enti-mihetsika amin’ny fifidianana aza, hono. Atao hoe hono, fa tsy hita tsinona izay anamarinana sy anaporofoana azy.
Ny amin’izay indrindra, tsy maintsy itadiavana antony hafa anamarin-tena ve ny tsy fandriampahalemana? Na fahantrana izay, na tsy fisian’ny asa, na tsy fahampian’ny mpitandro filaminana… Tsy mba mety hiaikena sy homen-danja amin’izany ny tsy fahombiazan’ny mpitondra fanjakana.
Ny tsapa sy iainan’ny vahoaka? Saro-tahotra fadiranovana sy loza raha hiaro ny tenany sy ny toerany ny mpitondra. Resaka ihany ny hoe mpitandro filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy tena imasoana ho vaindohan-draharaha: tsy laharam-pahamehana, tsy ampitomboana tetibola…
Manginy fotsiny ny famelana ny vahiny hanjakazaka amin’ny fandrobana harem-pirenena, ohatra, manakorontana ny fiainan’ny vahoaka ifotony. Eo koa ny tsy fisian’ny fanazavana hatramin’izao ny amin’ny halatra taolam-paty, halatra lakolosy; eny, na ny halatra taova aza… Inona ny marina?
Tena manao ny asany sy omena ny enti-manana ary voatsinjara araka ny tokony ho izy ve ny mpitandro filaminana amin’izany rehetra izany? Tsy mahagaga raha manjaka ny fitsaram-bahoaka. Mahazo vahana hatrany ny tsimatimanota, ny kolikoly, ny kiantranoantrano, ny tany lavitra fanjakana…
Eo koa ny tsy fanarahan-dalàna saika amin’ny sehatra sy ny ambaratonga rehetra, ny fisian’ny lehibe tsy mba diso. Inona ny vahaolana azo antoka, mahomby, maharitra… ? Efa tsy matoky mpitondra fanjakana ny ankamaroan’ny olona. Na mpitandro filaminana io, na mpitsara, na lehiben’ny distrika… ?
Amin’izao fiatrehana ny fifidianana hoe laharam-pahamehana sy tsy maintsy atao izao, aiza ho aiza marina izay fampanjakana fandriampahalemana izay? “Izay manaiky ny olon-dratsy tsy misy ady atao aminy dia miara-miasa aminy”, hoy ny pasitera Martin Luther King izay. Alao hery àry…